Ancient Egypt: vapristi, ruzivo rwavo muupenyu paruzhinji. ruzivo chii akagarwa Vapristi veIjipiti?
Zvinenge ose kana kureva muIjipiti yekare Zvechokwadi, kunyanya chepiramidhi. Historical ruzivo pamusoro temberi veIjipiti Pharaonic nguva nanhasi vakachengetedzwa zvishoma. Chokutanga izvi chokuita nguva Umambo Old. Kazhinji, vakanga kwaibva chete mharidzo.
Paiva vanonzi zuva mutemberi, zvirongwa vane zvinhu huru dzaiva pedyo dzinogarwa zvivako, avhareji uye Umambo New. Zvakanga zvakasikwa, nokuti vaionekwa panogara Mwari.
Vanhu kushumira netemberi izvi veboka chinokosha munzanga muIjipiti. Somuenzaniso, munguva Ramesses ivo nazvo gumi muzana ari kushandirwa nyika uye rinenge chete nhamba yevanhu. Ancient Egypt, apo vapristi vaionekwa kuva pabasa ramambo, haana kuva vezvikwata pamusoro zvenyika uye Ecclesiastical masimba. Nzvimbo kwazvo akabhadhara. Vapristi veIjipiti Ancient nokukurumidza vakatanga kubvisa nzvimbo dzavo enhaka.
Kudzidza nyika, nyanzvi vakasvika pakugumisa kuti boka iri rakabatsira basa guru paumbwe uye kubudirira hurumende, kukura kwepfungwa utano uye kuchengetedzwa nhoroondo uye tsika. Ancient Egypt, apo vapristi kwainzi sezvo zvaichengeta vetsika matsvene, maererano Herodotus, chainyanya wakazvipira uye zvechitendero muna Ancient World. Kare zvakanzi vaidavira kuti kudzorwa nevafundisi inokanganisa upenyu vanhuwo zvavo uye nehurumende kukura. Kutaura zvazviri, vapristi muIjipiti yekare, ari vachengeti tsika matsvene, wakapata chihombe basa munhoroondo uye tsika iyi rudzi yekare. Uye ichi runoratidzwa ndechokuti mubudiriro ino ikaramba iripo kwenguva yakareba kupfuura dzimwe.
MuIjipiti, kwaiva rinokosha nemhuri. Vaiva nesimba guru zvechokwadi, ndiye muparamende nokuzvibata. Uyezve, Ancient Egypt, apo vapristi vaiona, vanodudzira naMwari, akararama mitemo yavo. Uye yakanga isingori vanhuwo. Maonero avo vakateerera mirawo kunyange vanaFarao.
temberi muIjipita akanga akapfuma zvakakwana, kunyange kupfuura vatongi. Asi vapristi veIjipiti yekare, iyo mufananidzo dombo uri - uchapupu, akapfeka zvinoshamisa nyore. Ivo vaipfeka namaapuroni uye chete ndokuzvigadzirira nguo. Munzvimbo kunyanya pamitambo, vapristi izvi vanoratidzwa chena. In mafirimu akawanda, ndichizivisa sei aripo uye vakava muIjipiti yekare, vapristi anomiririrwa misoro yavo akaveura kupenya, saka kutongokwizwa mafuta pamusoro skulls dzavo kuti tiratidze chezuva. Izvi zvinoonekwa vanoshumira paimba Akasiyanisa zvikuru chete nguo yomunharaunda kwamachinda, chaizvo muumbozha.
Kunyange zvakadaro, vanhu vakawanda vachiri vasina pfungwa uyo vapristi muIjipiti yekare. Ichi rinokosha vanhu vakaderera varanda pemasimba epamusoro, uyo akaita vakawanda mashandiro munyika. Ravaifanira kuongorora kuremekedza vanamwari veIjipiti, uyewo tsika uye mhemberero.
Asi basa ravo munyika haungoratidzwi. Imhandoi ruzivo akagarwa vapristi veIjipiti, achiri zvinoshamisa venhau uye mamwe masayendisiti akawanda. Vaiva vatakuri kupfuura-chinja pakati mukwende kwepfungwa kuti akanga apfuura kubvira chizvarwa nechizvarwa, kubva panguva kare. ruzivo rwavo uye zvakaitika inochengetwa somunhu inofambirana kurindwa muchivande.
Nhasi masayendisiti kuti zvakawanda zvakawanwa nokudzidza Ancient Egypt. Vapristi vakakwanisa kwete chete kuporesa, Vakadzidzisa vana zvakanakisisa dzemarudzi mombe akatunhidzwa, vakagamuchira mhando itsva zvinomera. Vakatosvika ndiye mukana kugadzirisa mores dzevanhu. Zviri vashumiri ava vamwari vakasarudza kupfuura akakodzera pakudyara kana kukohwa nguva, Vakatsunga chaiyo mazuva ayo Nile mafashamo.
Uyezve, kana vaigadzirira fungidziro dzavo vapristi echiGiriki vaishandisa mashoko kubva raibhurari mutemberi, vairinda hwakadzama zvikuru zvaanorumbidza vazhinji nyeredzi mananara. Izvi runoratidzwa dzakawanda artefacts kuwanikwa Pavaichera.
Kudzidza muIjipiti yekare chaisanganisira nyanzvi dzakawanda. Asi hapana munhu anogona kutaura kuti anoziva nebudiriro ichi kumugumo, uye, kunyanya ane mufananidzo hwakanyatsorwisa rakakwana ichi wayo mukuru vanhu vakaderera.
Mubvunzo chii ruzivo akagarwa vapristi veIjipiti, yasara yakazaruka. Asi chinhu chimwe chingataurwa: ruzhinji masayendisiti haana kuramba shanduro kuti vanhu nhasi zviri zvakawanwa yavo ruzivo.
MuIjipiti yekare kwaikosheswa dzakabudirira nezvenyeredzi, iyo inofambirana intersected nyeredzi. Zvisinei, zvakanga zvisiri "proritsatelskoy" uye okurima uye zvokurapa. Vapristi kudzidza zvinoitwa nyeredzi nezvimwe miviriwo yekudenga nechisikirwo uye zvakanaka vanhu.
Asi pane imwe pfungwa: kuunganidza yapedyo zvikuru ruzivo yebudiriro yedu chikwereti kuna vamiririri extraterrestrial dzomunyika. Uye ichi hwakabatana tendero kwakadaro neHurumende seEgipita yekare, vapristi vane yose Mararamiro vanhu vayo uye dzavo dzechitendero netsika vymeryat maererano nemirairo chakaita nyeredzi Sirius.
Zvinoshamisa, raiva zita uye mwari mukuru vaEgipita. Osiris ... This zita pachena anzwike kuyemurwa uye kuremekedza Sirius.
Vapristi, sezvo vazhinji vanotenda, haana ndanzwawo kudzvinyirira kuda chitendero muIjipiti. Havana kutya kwake vanhuwo zvavo. Uyezve, chitendero mubudiriro ino ndiko evanhu kukura uye munhu kukura.
MuIjipiti, vapristi vakanga rakakamurwa mapoka, kuita mamwe mabasa. Vakanga vakaita vachengeti vezvakavanzika zvitsvene, uye vakuru vechitendero. Nokuti kunyange yakadereresa chinzvimbo aiva chaizvo kudzidza, uye izvi zvakanga zvakakomba uye zvakaoma. Kana, somuenzaniso, kutaura pamusoro Bakenkhonsu basa mukuru paitonga Ramsesa Velikogo, kurovedza wake rakatanga apo mupristi ramangwana nemakore mana chete, ndokuguma makore makumi maviri.
Izvi kwainzi dzavo chombo simba kupfuura. Vakashandisa mashiripiti mune zvinenge zvose mabhora muupenyu. Somuenzaniso, kurapa murwere, mupristi muIjipiti kutanga akatanga naye chiratidzo. Panguva murwere yokukanganwa, iye encoded kuziva yake aida mugumisiro: kuuya mangwanani uye kwakakwana kupora.
mashiripiti avo yaishandiswa zvose zvoupenyu, asi mumunda zvokurapa uye vakachengeteka chokuita mushonga, nomweya netsika muIjipiti yekare zvasvika kwayo kunonyanyisa kukura.
Chero kushandisa mishonga muIjipiti yekare, Akaperekedzwa kutanga murwere ari mamiriro ichi, uye ipapo yeEncoding rinoitwa pasi incantations uye kuteterera zvikuru chiremera vamwari.
Vapristi zvakakwana Inoziva unyanzvi kuburikidza nomweya kwokukakavara kukanganisa vavengi vavo, asiwo vavengi mamiriro. Kuti vaite izvi, vakashandisa chakavanzika tiwane zvitsinga Psychotechnics akasiyana Somuenzaniso-crafting wakisi inofananidza vavengi, uyewo pamusoro zvavo mashiripiti mifananidzo. For kure kugarotamba pachavo vaifanira kupinda nomweya, kuti kukwanisa kukanganisa pfungwa uye chitunha vavengi.
Dzimwe nyanzvi dzinodavira kuti vapristi veIjipiti ndivo madzitateguru ruzivo kwevanhu pamusoro chinonakidza kuti hypnosis.
Tinoziva kuti vapristi izvi temberi vaiita wokutanga basa vanamwari ezvitendero. Asi kwete chete. Vapristi zvakakwana pakugona Nzira kuti tsika - pamariro - mashiripiti sezvo makuva uye makuva muEgipita yekare aiva mugove. Zvinofungidzirwa kuti vakakwanisa kunyengedza usingaonekwi zvakavanzika zvitsinga uye ", ka" - kuvapo pashure pokufa, munoziva mummify vakafa. Vapristi mukavaisa sarcophagi pedo navo nokuti chiitiko chinoitwa mashiripiti zvinhu. "Ushabti," sezvo vakanga vakadamwa, maererano vaEgipita, wairindwa "Ka" mushakabvu mune humwe upenyu.
Tsika uye netsika
Vakawanda vanofunga kuti nzira vakaratidza kuremekedza avo vamwari, uye vakadzokera shure kwake pamusoro pavo nokusingaperi. Imwe tsika, kana vapristi Osiris kwazvakarerekera zuva kana New Year Evha akapfeka zvokupfeka uye anoedzesera zvifukidziro, uye ipapo vakaenda muguta uye akafamba mumigwagwa, chakafanana zvikuru carnivals nhasi. Musiyano chete ndechokuti havana chete kwakaitika kwomwedzi, uye anonzi setsika kunyanya tsvene, sezvo muvanhu ano vanowanzochema varaidzo shou.Tem mudukusa vapristi simba kupfuura "chombo" raiva mashiripiti avo. Paiva nomweya wose tsika pamwe mazango, potions, mifananidzo uye runofarira, izvo kuchengetedza kusanganisira nezvirwere zvakasiyana siyana, kubva ikaruma nezvipembenene uye penyoka nezvinyavada uye nezvikara. Uyezve, pakati vanhu vakaderera ichi akaita tsika chinokosha kuti zvakashamisa vatsvakurudzi kusvikira ikozvino. Somuenzaniso, nei vapristi vekare vokuIjipiti, kusiya kereke, akatsigira kure.
Kundikana danidziro Prince Igor raMwari Polovtsy
Mambokadzi Spain. Mambokadzi inozivikanwa kwazvo Spain
The Pope Innocent 3rd: Biography, ngano nzombe
Gorbachev raMwari Anti-doro kambani: rimwe gore. Pfungwa pamusoro Anti-doro chirongwa pasi Gorbachev
Ceramic meno: zvayakaita, unhu, uye kugadzira wongororo
Kupenya kwakanaka kwegore rezhizha uye kwete chete.
Recipe zucchini nyama. Simple uye zvinonaka
Yakapwanyika - This Crumbly particulate inorganic zvinhu
Upenyu Dubai: zvayakanakira nezvayakaipira. Chii shure glitz dzomutengo Dubai
Nezvirahwe pamusoro penyanza pamwe nemhinduro. Chirahwe pamusoro Pacific Ocean. Nezvirahwe pamusoro makondinendi uye makungwa (Grade 3)
City Siauliai, Lithuania: zvinokwezva, mapikicha
Parkinson nehosha: Mabatirwo zvavo mishonga. New pakurapa Parkinson chirwere acho mishonga
Icon Egyptian kunyora zita uye sokunge